Fifidiananan ben’ny Tanàna Antananarivo Renivohitra : Andriantsitohaina Naina no kandidàn’ny IRD | NewsMada
Raikitra ny fifidianana ben’ny Tanàna, amin’ny 27 novambra. Ho an’Antananarivo Renivohitra, kapitalin’i Madagasikara: kandidàn’ny IRD Andriantsitohaina Naina. Olom-baovao, vonona, sahy, raiamandreny, zoky, manam-pahendrena…
“Mila fanarenana haingana sy maharitra Iarivo, mila olom-baovao, olona vonona, olona sahy, raiamandreny, zoky, manam-pahendrena. Mitady ianareo, mitady isika. Vonona aho androany ho ben’ny Tanànan’Antananarivo.”
Io ny nambaran’ny kandidà Andriantsitohaina Naina, amin’ny anaran’ny Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina (IRD), ho ben’ny Tanàna, Antananarivo Renivohitra, teny amin’ny PK 0 Km, Cheminot, Antanimena omaly, amin’ny firotsahany hofidina amin’izao fifidianana kaominaly izao.
“Isika rehetra no hanavotra an’Antananarivo. Ry vahoakan’Antananarivo, tsy nidirako hatramin’izay ny politika. Fa rehefa nandinika lalina aho, mahatsapa fa manana adidy: adidy amin’ny firenena, adidy amin’ny tanànan’Antananarivo”, hoy izy.
Mpandraharaha izy, manana ny orinasany. Ny asany izay ho an’ny ankohonany, ho an’ny mpiara-belona, ho an’ny mpiray tanindrazana. Vonona izy ankehitriny hiasa sy hanolo-tena ho an’Antananarivo.
“Zanak’Iarivo aho, ary Antananarivo no nahatoy izao ahy”, hoy ihany izy. Raim-pianakaviana ny tenany, ary mitsinjo ny taranaka faramandimby. Hotiaviny sy hotsinjoviny toy ny zanany Antananarivo.
Havokavoky ny firenena Antananarivo
Antananarivo Renivohitr’i Madagasikara, fo mitepo sy havokavoky ny firenena. Antananarivo fanilo, tokony ho reharehan’ny mponina ao aminy sy ny firenena iray manontolo. Kanefa sempotra Antananarivo, ankehitriny, tofoka ny vahoaka. “Ry mponina Antananarivo, malahelo isika. Malahelo mahita ny zava-misy eto an-drenivohitra, mahatsapa fa voailika ireo marefo, ary tsy hita intsony izay ianteherana”, hoy ihany izy.
Very ny soatoavina maha Malagasy. Very fanahy ary difotra tanteraka ao anatin’ny haizina, ny loto, ny fitiavan-tena ny tanàna. Ny tombontsoa manokana no nampiharina, fa tsy ny fijerena intsony ny tombontsoa iombonana.
Manan-danja ny fiaingana
Manan-danja ny toerana PK 0 Km, nanaovany ny fanambarany: PK 0 an’Antananarivo sy i Madagasikara. Eo no miainga ny fanavotana an’Iarivo, mamaritra ny lalana mba ho kapitaly maoderina ny Renivohitr’i Madagasikara. Mba hiverina ny hambompon’ny mponin’Antananarivo.
“Manana adidy sy andraikitra isika rehetra hanavotra an’Antananarivo”, hoy hatrany izy. Manana adidy sy andraikitra isika rehetra hamerina an’Antananarivo ho tanàna madio, maoderina, mamiratra. Manana adidy sy andraikitra isika rehetra hahatonga an’Antananarivo ho tanàna mahate honina ary mampirehareha antsika rehetra.
Efa nametraka ny antontan-taratasy firotsahan-kofidina teny amin’ny Ovec, Nanisana, omaly, ny solontenan’ny kandidà Andriantsitohaina Naina.